Reer Husby oo mudaharaad dhigaya | Somaliska
Bulshada ku nool xaafada Husby ee duleedka magaalada Stockholm ayaa isku soo bax sameynaya Maalinta sabtida 26 bisha iyagoo ka mudaharaadaya barakac lagu hayo adeegyada bulshada ee xaafadaas ku yaala. Dibadbaxa ayaa ka dambeeya ka dib markii dowlada ay go-aansatay in la xiro rugta caafimaadka ee (Husby vårdcentral) 12 April. dadka xaafada ayaa ka careysan in iyagoon lagala tashan la iska go-aamiyay in la xiro goobta caafimaadka, iyadoo 16kii Maarso ay sidoo kale xaafada ka guurtay Posten. Dibadbaxa ayaa ka dhici doona Husby Torg, waxa uu bilaaban doonaa saacada markay tahay 12:00 - 16:00. Isku soo baxa ayaa waxaa ka soo qeyb gali doonaa dhamaan qeybaha bulshada iyo siyaasiga Gustav Fridolin oo ka socda xisbiga Miljöpartiet. Xaafada Husby ayaa ka mid ah xaafadaha ay Soomaalidu ugu badanyihiin ee magaalada Stockholm. Berhayaan dambe waxaa muuqda in xaafadaha soo galootiga barakac xaga adeega bulshada ah lagu haayo iyadoo dowlada ay go'aansatay dhowr bilood ka hor in ay xirto iskuulka Bredbyskolan ee ku yaala xaafada Rinkeby.
Reer Husby oo mudaharaad dhigaya
Bulshada ku nool xaafada Husby ee duleedka magaalada Stockholm ayaa isku soo bax sameynaya Maalinta sabtida 26 bisha iyagoo ka mudaharaadaya barakac lagu hayo adeegyada bulshada ee xaafadaas ku yaala. Dibadbaxa ayaa ka dambeeya ka dib markii dowlada ay go-aansatay in la xiro rugta caafimaadka ee (Husby vårdcentral) 12 April.
dadka xaafada ayaa ka careysan in iyagoon lagala tashan la iska go-aamiyay in la xiro goobta caafimaadka, iyadoo 16kii Maarso ay sidoo kale xaafada ka guurtay Posten.
Dibadbaxa ayaa ka dhici doona Husby Torg, waxa uu bilaaban doonaa saacada markay tahay 12:00 – 16:00. Isku soo baxa ayaa waxaa ka soo qeyb gali doonaa dhamaan qeybaha bulshada iyo siyaasiga Gustav Fridolin oo ka socda xisbiga Miljöpartiet.
Xaafada Husby ayaa ka mid ah xaafadaha ay Soomaalidu ugu badanyihiin ee magaalada Stockholm. Berhayaan dambe waxaa muuqda in xaafadaha soo galootiga barakac xaga adeega bulshada ah lagu haayo iyadoo dowlada ay go’aansatay dhowr bilood ka hor in ay xirto iskuulka Bredbyskolan ee ku yaala xaafada Rinkeby.
Imisa ayaa lagu dhameeyaa koorsada SFI [Video]